(August 30,2016) Dawlada Maraykanka oo Turkiga u sheegaya inuu ka soo horjeedo dadaalka Turkigu isugu balaadhinaayo koonfurta Suuriya. – Awdal State
HomeWararka Soomalida2(August 30,2016) Dawlada Maraykanka oo Turkiga u sheegaya inuu ka soo horjeedo dadaalka Turkigu isugu balaadhinaayo koonfurta Suuriya.
(August 30,2016) Dawlada Maraykanka oo Turkiga u sheegaya inuu ka soo horjeedo dadaalka Turkigu isugu balaadhinaayo koonfurta Suuriya.
Ku xigeenka lataliyaha ammaanka qaran ee Maraykanka, Ben Rhodes, ayaa sheegay in Aqalka Cad uu kasoo horjeedo, dadaalka Turkiga uu ku doonayo in uu howlgalkiisa ciidan ku ballaariyo koonfurta Suuriya.
Hadalka mas’uulkan ayaa kusoo beegmaya xilli Maraykanka uu aad uga careysan yahay dagaalka waqooyiga Suuriya ku dhexmaraya Turkiga iyo xooggaga Kurdiyiinta oo labaduba xulafo la ah.
Waaxda difaaca ee Maraykanka, Pentagon, ayaa sheegtay in dagaalkaasi aan la aqbali karin, waxaana uu Maraykanka labada dhinac ugu baaqday in ay xoogga saaraan duulaanka ka dhanka ah ururka isku magacaabay dowladda Islaamiga.
Dhanka kale, Aqalka Cad ayaa xaqiijiyay in madaxweyne Obama uu dhigiisa Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, Axada soo socota uu kula kulmi doono shir-madaxeedka G20 ee ka dhici doona Shiinaha.
(August 30,2016) Dhalinyaro Baydhabo Ka Billowdey Socdaal Nabdeed Iyo Isdhexgalka Dhalinyarada – Dhegeysi
(August 30,2016) Sheekh Maxamuud Aw-Cabdulle Cariif oo dadka Somaliyed uga digay inay dhigtaan Xafladaha Dhalashada..